မျှော်မှန်းချက်၊ mission နှင့် တန်ဖိုးများ – Alpha
To becomeaTop leading Electrical Engineering Company in Myanmar delivering best service and best products with most competitive price.
To provide the most reliable service with the best affordable products to customers while building of basic infrastructure of electrical requirement in our country. Alpha Power will never fail customers’ expectation and we will vow to exceed it.
Integrity | Diversity | Innovation | Excellence
Alpha Power believes that conducting business ethically and beingaresponsible company are fundamental to the success of the company. We stand by ethical business practice that is consistent with our mission and core value.
To provide the most reliable service with the best affordable products to customers while building of basic infrastructure of electrical requirement in our country. Alpha Power will never fail customers’ expectation andwe will vow to exceed it.
Alpha Power အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူမှုရှိရှိ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဓိကကျသည့် အချက်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ Alpha Power ၏ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကုမ္ပဏီ၏ မျှော်မှန်းချက်၊ mission၊ တန်ဖိုးများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
Alpha Power ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ customer များအား အရည်အသွေးမြင့်လက်လှမ်းမှီနိုင်သော ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ လျှပ်စစ်အ‌ခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝယ်ယူသူများ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးနိုင်ရန်အတွက် အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
Alpha Power အနေဖြင့် ၄င်း၏ ဝန်ထမ်းများ၊ customers များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အစဥ်အမြဲကာကွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
customer များ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Alpha Power အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အသစ်အသစ်သော တီထွင်မှုများအား ကြိုးပမ်းဖန်တီးလျက်ရှိသည်။
Alpha Power အနေဖြင့် ၄င်း၏ customer များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ suppliers များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီနိုင်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်၊ တီထွင်နိုင်မှုများအား ကွဲပြားမှုအနေဖြင့် လေးစားတန်ဖိုးထားပါသည်။